ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၉ ၉ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်နေ့ အခမ်းအနား နယူးယောက်မှာ ကျင်းပမည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇန်န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၃
★ မြန်မာနိူင်ငံအမျိုးသားခေါင်းဆောင်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏ ၉၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ကို နယူးယောက်မြို့ တွင်
အောက်ပါအစီအစဉ်များဖြင့် ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့်ကြွရောက်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ ★
၁။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အတွက် ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ အကျွေးအမွေးဖြင့်ဧည့်ခံခြင်း၊
၂။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ပတ်သက်သော ပန်းချီကားများပြသခြင်း – နယူးယောက်၊ မေရီလန်း၊ ပန်းချီ(ကို)သန်းဋ္ဌေးမောင်၊
၃။ မေရီလန်းပြည်နယ်၊ သပြေညို မြန်မာစာသင်ကျောင်းမှ ကျောင်းသူကျောင်းသာများမှ ဗိုလ်ချုပ်သီချင်းသီဆိုခြင်း၊ ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း၊
၄။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြောင်းတစေ့တစောင်း – ကိုယဉ်ထွေး (မေရီလန်း)။
၅။ နယူးယောက် မြန်မာမိသားစုများမှလည်း ကဗျာရွတ်ဆိုခြင်း၊ သီချင်းသီဆိုခြင်း၊
၆။ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ စာတမ်း၊ သ၀ဏ်လွှာဖတ်ကြားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။
★ နေ့ရက်- ၈ ရက်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၄ (စနေနေ့)၊ အချိန်- (နံနက်) ၁၀း၀၀ မှ ညနေ (၆း၀၀) နာရီ
★ နေရာ- P.S. 12 James B Colgate, 42-00 72nd Street, Woodside, N.Y. 11377.
INVITATION TO CELEBRATE BOGYOKE AUNG SAN’S 99TH BIRTHDAY
FATHER OF BURMA (MYANMAR) (FEBRUARY OF 1915 – JULY OF 1947)
FATHER OF NOBEL PEACE LAUREATE AUNG SAN SUU KYI ON FEBRUARY 8TH, 2014.
1. REGISTRATION AND ART SHOW.
2. SNACK/ LIGHT FOOD.
3. BURMESE TRADITIONAL PERFORMANCE.
DATE- 8TH FEBRUARY 2014 ( SATURDAY)
PLACE- P.S. 12 JAMES B COLGATE
42-00 72ND STREET, WOODSIDE, N.Y. 11377.